12th May, 2021 Wed १२:०८:५५ मा प्रकाशित
सबै धोकेवाजहरुलाई जम्मा गरेर शेर बहादुर जीले केही गर्न सक्नु हुन्न ? हाम्रो सभापति जीले धोकेवाज कम्युनिष्टहरुको झुण्ड जम्मा गर्ने तिर होइन ताजा जनादेशको लागि चुनावमा जानुपर्छ ।
वैकल्पिक सरकार आवश्यक छ या छैन भन्ने विषयमा बहस गर्नुपूर्व तीन वटा विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको छ । पहिलो, करिव दुईतिहाइको अत्याधिक बहुमतको शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्रीले तीन वर्ष नपुग्दै संसदमा किन विश्वासको मत लिन जानु पर्ने अवस्था आयो ? दोस्रो, नेपालको नक्सा सर्वसम्वतरुपमा पास गर्ने अनि संसद किन भंग भयो ? तेस्रो, दुई तिहाइको मतले निर्वाचित पार्टीका नेताहरुले आफ्नै दलका नेतालाई अविश्वास गरी प्रतिपक्ष दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन किन लागिपरे ? यी तीन कुराको हामीले विश्लेषण नगरिकन समस्याको समाधान हुँदैन । अब प्रष्टमात्र पारेर पुग्दैन विचार केन्द्रित बहस हुनु जरुरी छ ।
नेपाली जनताले कम्युनिष्टलाई कसैले पनि नसोचेको झण्डै दुई तिहाइको बहुमत दिएका हुन् । यी भोट सत्ताको दुरुपयोग गर्न होइन, राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक उन्नतिको लागि दिएका हुन् । वीर गोर्खाली भनेर चिनिएका नेपाली अरबमा बोरा बोक्न नपरोस भनेर भोट दिएका हुन् । देशको स्वाभिमानसंग जनताको स्वाभिमान जोडियो भन्ने थियो । तर, कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारको नेताले देशका चुनौति र समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सकेन । भूकम्प, नाकावन्दी र कोरोनाले लथालिङ्ग भएको देशबाट नेपाली जनता मुक्त हुन चाहन्थे। तर यो सरकारले प्राथमिकता नै पैलाउन सकेन । उनीहरु आफैभित्र सानासाना स्वार्थमा झगडा गर्न थाले । उनीहरुको झगडा राष्ट्रिय मुद्दा र नीतिको विषयमा होइन । संवैधानिका निकायमा एउटा कर्मचारीको नियुक्ति, एक थान मन्त्रिको नियुक्ती नपाएको झोकमा एकले अर्काको तेजोवद गर्न थाले ।
पार्टीभित्रको झगडालाई लिएर प्रधानमन्त्रीले देशलाई मध्यावधि चुनावमा लैजाने चेष्टा गर्नुभयो । कोरोना महामारीको कहाली लाग्दो स्थिति रहेकोछ । अक्सिजन नपाएर मानिस मरेको मरै छन् । यी सबै विषयलाई ओझेलमा पार्ने किसिमले प्रधानमन्त्री ओली संसदमा विश्वासको मत लिन जानुभयो । अन्ततः असफल हुनुभयो ।
अहिलेको विकल्प भनेको ताजा जनादेशमा जानुनै हो । अहिले नेताहरुले जति मिडियावाजी गरेका छन् ती काम नपाएका, असफल भएका नेताहरु हुन् । अवसर पाएर पनि काम गर्न असफल भएका नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका झुण्डहरुको हातमा मुलुकको राजनीति गयो । यीनीहरुले राजनीतिलाई विकृत बनाइदिए । जनाताले केही पाएनन् किनकी उनीहरुको दिमाग नै विकृत थिए । त्यही विकृत दिमागले राज्यसत्ता सञ्चालन गर्न खोज्दा देशको अवस्था दयनीय हुँदै गयो ।
नेपालको अहिलेको स्थिति भनेको दश जनाले दशजनाको निम्ति निर्णय गर्छ, त्यतिमात्र हो । कम्युनिष्ट नेताहरुसंग कुनै भिजन, सोच रहेनछ । कुनै जिम्मेवारी पनि रहेनछ । उत्तरदायीत्व नै रहेन छ । साना कुरामा झगडा गर्छन् । सरुवा बढुवाको निम्ति पार्टी फुटाउँछन् । कोही छ, राजनीति विश्लेषण, राष्ट्रिय सवालको विषयमा बहस गर्ने ? यीनीहरु पार्टीका नेता हुन् ? यी कुनै नेताको परिभाषाभित्र पर्छन् ? अहिलेका नेताहरुबाट सरकार र सिंगो देशको नेतृत्व गर्न सक्दैनन् । जसले आफ्नो पार्टीको नेतृत्व गर्न सकेका छैनन्, उनीहरुले मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्छन् ? जबसम्म चुनावबाट कम्युनिष्टहरुलाई विदा गर्न सकिदैन तवसम्म मुलुक बन्दैन । सिङ्गो दुई तिहाइको सरकारले गर्न सकेन । सबै धोकेवाजहरुलाई जम्मा गरेर शेर बहादुर जीले केही गर्न सक्नु हुन्न ? हाम्रो सभापति जीले धोकेवाज कम्युनिष्टहरुको झुण्ड जम्मा गर्ने तिर होइन ताजा जनादेशको लागि चुनावमा जानुपर्छ । ६ महिनाको लागि मन्त्री, सचिव, राजदुत, प्रधानमन्त्री जसजसलाई चाहिन्छ उसैलाई दिए हुन्छ ।
( भण्डारी नेपाली कांग्रेसका नेता हुनुहुन्छ)